Ukubheja kwe-Intel kuma-CPU athengiswe kubhodi yomama | Kusuka kuLinux
Kubukeka sengathi ezikhathini zakamuva enginakho ukukunika izindaba ezimbi, kepha akunjalo, kunjalo-ke izinto. Namuhla kuhlobene nomkhuba okhathaza umhlaba womhlaba wesoftware ne-hardware futhi omayelana nokwanda kwamapulatifomu avaliwe kumsebenzisi, ake ngichaze.
Kuze kube manje, abakhiqizi bebhodi lomama bakhiqiza ama-motherboards abo kuma-chipset atholakalayo, kungaba owokwakhiwa kwe-Intel noma i-AMD, kepha kungabandakanyi ama-processor (ama-CPUs), afakwa ngokuhamba kwesikhathi ngabasebenzisi bokugcina noma ngabasebenzisi. , okungenani, ngokuqondene ne-Intel, lokhu sekuzoshintsha, njengoba kuqinisekiswe ngu-Adrian Kingsley-Hughes izolo ku isihloko kushicilelwe kuZdnet, kuqinisekisa amahlebezi ngalolu daba, kusakazeka enetheni isikhathi esithile.
Ushintsho kuhlelwe ukuthi lwenzeke ngokungena emakethe yama-processor angama-nanometer ayi-14 azophuma negama lekhodi iBroadwell, enezakhiwo zeBGA (Ball Grid Array), ezehlukile kwiLGA yamanje (Land Grid Array). Noma kungekho lwazi ngalolu daba olutholakala kusiza esisemthethweni se-Intel, njengoba kushicilelwe kusayithi Ukubuka kwe-PC, uchungechunge lweBroadwell kufanele lukhishwe kwikota yokuqala ka-2014.
Manje, kusho ukuthini lokhu kushintsha kusuka ku-LGA kuye ku-BGA. Ukupakisha kwe-LGA okusetshenziswayo njengamanje kuyakuvumela ukuthi ifakwe esikhwameni noma, uma yehluleka lokho, ithunyelwe ngqo ebhodini, ngenkathi okufakiwe okuhlongozwayo, i-BGA, kungakhelwanga ukufakwa esokeni, okusho ukuthi amaprosesa okumele abe ngawo unomphela kuthengiswe epuletini, njengoba kunjalo namanje ngamathebulethi nezinye izinhlobo zelaptop.
Lolu shintsho lunochungechunge lwemiphumela esivumela ukuthi sicabange ngoshintsho olukhulu emakethe ye-PC yedeskithophu, njengoba sazi namuhla, nezinzuzo nezinkinga zalo wonke amaqembu, esizozama ukuwabeka ngezansi.
Inzuzo esobala yabasebenzisi bokugcina ukuthi ukucushwa okutholakala ngabahlanganisi abathengisayo kuzoletha ibhalansi elingcono phakathi kwamandla we-CPU nokusebenza kwebhodi, okuzoholela ekusebenzeni okungcono kwemishini nempilo ewusizo ende. Akuyona imfihlo kunoma ngubani ukuthi iningi lalaba bahlanganisi balungiselela imishini yabo ngokuya ngezinto (ikakhulukazi amabhodi nama-CPU) abawathola ngenani lentengo elingcono ngaso sonke isikhathi, okwenza kube nemishini engalingani ngokuphelele, enama-processor aphakathi nendawo- phezulu kumabhodi ezinzuzo eziyisisekelo futhi okuphambene nalokho.
Enye inzuzo engaba khona ukwehla okulindelekile kwentengo yemishini ngoba izindleko zokukhiqiza kufanele zibe phansi, ngoba ukufaka i-CPU ngqo kubhodi yomama kushibhile kunokufaka isokhethi bese ukufaka i-CPU kusokhethi. Lokhu kuzoba nomthelela ocishe usheshe kubahlanganisi abakhulu be-OEM, manje abanentshisekelo ngoshintsho.
Ngakolunye uhlangothi, ububi buyehluka futhi abubalulekile. Njengokuqala kufanele sisho okukodwa okuzothinta kakhulu ama-modders nabathandi begajethi, ukuthuthukiswa kwe-CPU sekuphelile. Ngeke sisakwazi ukuthenga ikhompyutha enentengo efinyelelekayo ngokuzayo, ngokutshala imali okunye, ukuyivuselela nge-CPU engcono.
Okunye okubi okufanele kubhekwe ukuthi, ngokuvamile, isikhathi sokusebenziseka kwamabhodi womama siphansi kunaleso sama-CPU, ukuze kuthi, lapho ibhodi lomama liphuka, sibe nethuba lokusebenzisa imemori efanayo ne-CPU, okungaba yini ngaphandle isithombe ngokuzayo. Kusazobonwa ukuthi yiziphi izimo ezintsha zewaranti abakhiqizi abazonikeza zona nge-motherboard + CPU esethwe kusukela manje kuqhubeke.
Ithuba lokuhlanganisa imishini yethu, kusuka ekucushweni okukhethwe yithi, lizosuswa kakhulu, okuyinto engeyona into encane kubantu abathanda lokhu abakujabulelayo futhi engicabanga ukuthi kuseyingxenye engacabangi yemakethe.
Kusazobonwa ukuthi abakhiqizi bebhodi lomama bazosabela kanjani kulolu shintsho, ngoba kubo kungasho ukuboshelwa kakhulu ku-Intel njengomhlinzeki wama-CPU kanye nengxenye yama-chipset futhi, ngakolunye uhlangothi, kubahlanganisi be-OEM njengamakhasimende acishe abe ngabodwa ukukhiqizwa kwabo, kulahlekelwa Amakhasimende namuhla athenga izinto ngazinye, njengokufaka esikhundleni, ukukhuphula izinga noma ukumisa imishini emisha. Ngokwami, okuwukuphela kwenjabulo engiyibonayo kubo ukwehliswa kwephothifoliyo yamamodeli ekukhiqizeni okungasho ukwehliswa kwezindleko zabo.
Enye indlela efanele ukuxazulula le nkinga kungaba ukufakwa kohlobo lwesokhethi oluvumela umhlangano ngaphandle kokushisela ama-Broadwell CPUs, kepha lokho kungasho ukwanda kwezindleko zokukhiqiza zamabhodi womama, kusazobonakala uma i-Intel ikhipha ukuthengiswa imininingwane ama-CPU adingekayo.
Ngakolunye uhlangothi, kufanele silinde ukuthi i-AMD isabela kanjani kulesi simo, uma ithatha indlela efanayo noma igcina ukupakishwa kwabaprosesa bayo bokufakwa kwesokhethi, ngokwenza kanjalo kungathola isabelo esikhulu semakethe ngokucekela ama-modders nabahlanganisi abancane abenza lokho bengayemukeli inselelo evela ku-Intel, kepha uma kunikezwe isimo samanje i-AMD edlula kuso, noma ikuphi ukuhlaziywa kwalokhu kungaba ukuqagela okukhulu.
Yize lokhu kubonakala kungushintsho oluzothinta ngokujulile umqondo wamakhompiyutha wedeskithophu njengoba siwazi kuze kube manje, ngiyenqaba ukucabanga ukuthi inzuzo yabo enkulu ngaphakathi kohlelo lwamanje lwedivayisi, ukukhubazeka, izolahleka, uma-ke kwenzeka, asipele isigwebo sakhe sentambo. Asethembe ukuthi ngeke kwenzeke.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Ukubheja kwe-Intel kuma-CPU athengiswe kubhodi yomama
Inkinga ukuthi i-AMD ayikho ezingeni layo lezomnotho. Kukubakhiqizi be-chipset nabama-motherboard ukuthi bayiphikise ngoba lapho babezobashiya bengenamakethe nangenxa yomgwaqo.
Isimo esibekiwe se-AMD senza noma yisiphi isibikezelo singenzeki, kepha maqondana nabakhiqizi bebhodi lomama, imininingwane eminingi kufanele itholakale ukuthola iziphetho zokuzibonela, lapho uthi nhlá, lokhu kungasho ukwehliswa kwezindleko kubo, okuthi esimweni samanje semakethe kungabaluleki ...
Konke kubuya, ngisakhumbula amabhodi womama we-PC-CHIPS cishe eminyakeni eyi-10 eyedlule ayethengiswa njengama-hotcake e-cyber-cafe, kepha abantu abaningi baphunyuka ngenxa yokungahambi kahle ababenakho. Ibhizinisi liyancipha kubahlanganisi abazimele. Namuhla ama-laptops asemfashinini futhi uma ngesinye isikhathi ngivuselela i-PC yami ngizoya ngqo kudivayisi ye-ARM. Lokhu yikho, thuthukisa noma ufe.
Kuyiqiniso ... eminyakeni eyi-10 eyedlule ngathenga i-PC yami yokuqala, iPChips M810LR, yayine-processor ethengisiwe, kwakuyi-AMD Duron 1200+, ngicabanga ukuthi empeleni bekuyi-Duron 800 Mhz ene-oerclocking yasefekthri. Ngilondoloze ama-dollar amaningi ngaleso sikhathi futhi iqiniso bengingenazo izikhalazo, bekukhiqizwa cishe iminyaka eyi-8 ngaze ngathatha umhlalaphansi ... kepha kusamele kusebenze
I-PS: Ngikhohliwe ukusho ukuthi ngihlala ngisebenzisa i-GNU / Linux kuyo, ngiqale nge-SuSE Linux 6.4, kwase kuba yi-Mandrake 9.0, kwalandelwa futhi i-SuSE Linux 9.0 ne-9.3, bese ngivulaSuse 10, bese kuba isikhashana ne-Kubuntu 6.10, bese ngihambisa uye kuDebian Etch bese uqeda ngoDebian Lenny. Kuyafaneleka futhi ukusho ukuthi ngazama ama-distros amaningi we-GNU / Linux kumahlukaniso wokuhlola, ngafaka neFreeBSD neNetBSD yize ngingazikhumbuli izinhlobo ...
Eminyakeni engaphezudlwana kwengu-10 eyedlule nganginekhompyutha enebhodi le-pcchip, yayine-processor ye-athlon xp 1900+ ne-vulcano 7 heatsink, inkumbulo yenqama yayingu-256. Amabhodi ama-pcchips ngaleso sikhathi ayenezinkinga eziningi futhi leyo processor yahlaselwa ukushisa, ukuze leyo khompyutha ihlale isikhathi eside.
Ngiyayikhumbula futhi, sasivame ukuyibiza ngokuthi yi-PC-SHIT lapha ngenxa yekhwalithi yayo empofu, kuzo zombili izinto nasenqubeni yokukhiqiza.
Uyemukelwa emhlabeni wokuphelelwa isikhathi okuhleliwe….
Uma lokhu kwenziwa, kungaba ithuba lokuthi i-AMD ithathe izintambo zokubusa kwama-CPU .. Ngokwami, ngibona kuphela ukungalungi kwakho konke lokhu .. Intel, ubupholile ngaphambili ..
Kuyaxaka kimi ukuthi i-AMD ibhekene nokwehla komnotho okubi ngoba bonke engibaziyo nabangisebenzisa i-AMD, woza, angibazi abantu abasebenzisa imakrofoni ye-Intel.
Kubi kakhulu .. Futhi ngisebenzisa i-Intel kuphela (iyona engizwana nayo ngokuhamba phambili ku-GNU / Linux)
Ukuphelelwa isikhathi okuhleliwe, lokho kulula
Bakuthengisela i-pc ebandayo eminyakeni emi-2 yokuqala ukuze ungakwazi ukuyilungisa noma iba eqolo futhi kufanele uthenge enye
Ngibe necala lokufuna ukwazi lapho nginewaranti yeminyaka engu-2 (enwetshiwe engu-1 + 1), ethangeni lami le-Acer, usuku olulodwa ngaphandle kokuningi noma ngaphezulu yeka ukusebenza. Ngathi "Well I have the guarantee", okwangimangaza lapho ngihlola ukuthi sekuphele amasonto ama-3.
Angenelisekanga ngalokho ukuqinisekisa isiqinisekiso i-viacrusis ephelele, ngincamele ukukhokha ePlaza de la computación (MEX), ama-dollar angama-700 we-hard drive.
Uma kunokududuzwa, ukwenziwa kwesiqinisekiso kuyikhanda langempela kuwo wonke umuntu, kufaka phakathi abathengisi abakhulu abakhulu, abavame ukukhokhisa imali entengweni yokuthengisa ukumboza ukulahleka okungenzeka kubangelwe ngokunikeza iziqinisekiso kumakhasimende abo.
Isihawu. Ngivalelisa i-Intel bese ngithi sawubona ku-AMD yami entsha nge-Ati ngaleso sikhathi. Into embi ukuthi izodidana ne-GNU / Linux yami ngalowo nyaka.
Yebo, nge-ATI lungela ukulwa ngoba ayihambisani neLinux futhi ngikutshela njengomsebenzisi obekezelayo we-AMD, ngilangazelela ukwephula i-pc ukuze ngibambe entsha nge-nvidia noma i-Intel
okuhlangenwe nakho okuhlukahlukene. umfowethu unekhompyutha esekwe ku-AMD futhi iLinux yenza kahle.
Ngingumsebenzisi ojabulayo we-E-2 APU, enezishayeli zamahhala isebenza kahle kwi-gnome-Shell
Kubi kakhulu, yize iqiniso ngithanda i-AMD, angisithandi isimo sayo nesimo sayo sengqondo ngeLinux. Vele, ePhoronix bakhombisile ukuthi abashayeli abasha beMesa Gallium (mahhala) ku-kernel 3.7 ekukhuleni balungile impela, ababukeki noma bahamba phambili emhlabeni, kusobala ukuthi basadlulwa yiCatalyst, yize benethuba lokwethula izinkinga ezimbalwa futhi kube lula ukufaka, kusebenza kahle cishe yonke into ngaphandle kwemidlalo esebenza kahle kakhulu (i-GNU / Linux yendabuko ihlala ihamba ngaphezu kwama-fps angama-60) okushiya okungenani ithemba, ngoba ngaleso sikhathi mhlawumbe izinto sezishintshile.
Iyiphi i-AMD ezobamba lelo thuba uma iziveza? Akukho mqondo, kepha kufanele ukwenze, futhi ukwenze ngochuku, ugembule kanzima ngohlu lwawo oluphelele futhi unikeze ukwesekwa okuyiqiniso kwe-cross-platform, empeleni, uma ngabe ibadedele ngokuphelele abashayeli bayo, kungathatha isisindo esikhulu emahlombe ayo futhi ubhekane nokushiyeka kwawo okuningana.
Ngivumelana ngokuphelele nawe…
Ngilinde ukuthenga imidwebo maduze ngoba okwamanje ngidubula neRadeon edidiyelwe. Ngine-AMD Phenom II x4 micro egibele, kubhodi yomama yeGigabyte, bese ngiyabuza:
Ngabe uncoma i-nVidia noma i-ATI ukuyisebenzisa ku-Linux? Ngenhloso yokwenza ihlale isikhathi eside futhi izame ukusizakala (uma kwenzeka umdlalo uwela, nokuhlela isithombe).
Mayelana nobunzima bezomnotho i-AMD edlula kubo njengamanje, kunezinkomba eziningi kwi-intanethi nokuqagela okuningi, lokho akusho ukuthi abantu abaqhubeki nokuthenga imikhiqizo ye-AMD, okwenzekayo ukuthi kunokungaqiniseki mayelana nokuthi ikusasa lenkampani, noma kunjalo, asithembe ukuthi lingabhekana nalesi siphepho ngoba ukunyamalala komncintiswano osobala kakhulu we-Intel akwenzi intshisekelo yomuntu.
Uma kukhulunywa ngokwenza isincomo, engizokukwenza ukukunikeza iziphakamiso ezimbili: hlola amasayithi azimele lapho abeka khona ukusebenza kwezakhi zehadiwe, ezinjengeTom's Hardare (http://www.tomshardware.com), ukuthi ngekhwalithi nokusebenza kwehluzo nokunye ukuhlola amasayithi nezinkundla ze-distro ojwayele ukuzisebenzisa noma ozokusebenzisa ukuqinisekisa ukuthi lowo omkhethile unabashayeli abafanele futhi ubhekana nemibono yomsebenzisi ngubani isivele ingumnikazi wayo.
Ngicabanga ukuthi ubuhlakani bomuntu buzokuguqula lokhu, kukhona abanye bethu abangafuni ukuthi isobho seligayekile, uyabona, napster wanyamalala wafakwa esikhundleni somthwalo omkhulu, lo uyanyamalala kanti omunye uyeza, akunamkhawulo ekuhlakanipheni. Jabulela
Uxolo ngokungavumelani nawe, kepha ngabe wake washintsha i-capacitor kubhodi yomama? Noma wazama ukudlula ekuthengiseni i-chip ngokuxhumana okungelona iqiniso? Ukuzama ukushabalalisa i-CPU kunzima kakhulu, ingasaphathwa eyokuthi wena badinga amathuluzi amakhono abiza kakhulu ukukwenza. Lokhu akuxazululwa nge-software ngeshwa ...
Uthini ngoCharlie Brown.
Angazi noma ikuthintile yini, kepha kube khona isikhathi, lapho ama-processor angama-386SX athengiswe ngasendleleni kubhodi yomama, othile weza nombono onobuhlakani wokubeka i-CPU ehlukile ngokusebenzisa ukunamathisela okukhona kwaleyo ekhona. Angikhumbuli kahle ukuthi isebenza kanjani noma ukuthi imishini ibiyini, kepha ngizokutshela ukuthi kungani sisebenzise i-386SX futhi sayidinga ukuthi ibe yi-DX (ngiyazi ukuthi iprocessor yezibalo yayithengiswa yodwa, kepha i-motherboard yayingenaso leso sikhala kuyatholakala). Ngakho-ke angiboni lutho olusanganisa ukuphawula okwenza ukulandwa.
Lokhu engikutshela khona kwakungo-1990.
Yebo, ngiyayikhumbula i-386SX, kepha manje ngithola ukuthi othile weza nalelo khambi, empeleni nganginalo ehhovisi kodwa ibhodi lalinesokhethi elifakelwe i-co-processor yezibalo futhi ngaphandle kwalokho izinganekwane zasemadolobheni yithi, UMA babekhona ngoba ngikwazile ukuyithola futhi kwasebenza ngayo.
Kodwa-ke, angicabangi ukuthi into ilula kanjalo, futhi angiqhathanisi inani "lemilenze" lama-386 nalezo i-Broadwell ezoba nazo ngokuqinisekile, uma ngabe namuhla nge-i7 baya kwinkulungwane ngakho-ke, angikwazi Cabanga ukuthi kuzoba namangaki kanye nobuningi bazo ngesentimitha lesikwele. Lolu hlobo lokushisela lutholakala kuphela ezindaweni zezimboni.
Ngiyethemba uqinisile futhi nginephutha ngoba angiluthandi ngempela lolu shintsho.
hahaha, intel Intel ... Ngiyabona ukuthi bayaphi: ama-ultrabooks kanye nalesi sitayela.
Kungenxa yokuthi kuma-desktops, kuyisiphukuphuku ukufuna ukuthenga iprosesa elithengiswe ebhodini, futhi i-AMD nakanjani izokusebenzisa lokho, ngisanda kufunda ukuthi bebefuna ukuhlanganisa isokhethi elifanayo kuzo zonke izinhlobo zabo zeprosesa.
Ungakhohlwa noma ngabe ukuthi i-Intel ne-AMD bobabili sebengabanikazi abafanayo, babeka inkampani ngayinye emkhakheni ohlukile 😛
Angazi ukuthi lokhu kungaba kubi kangakanani ngaphandle kokuthi ngiqede nya amathuba okubanjwa kwemikhuba ngokwezifiso.
Uma siyihlaziya ngokungakhathali, ngaphandle kwamacala akhetheke kakhulu namuhla akekho owakha imishini yabo yangokwezifiso:
1. Ama-laptops (futhi ikakhulukazi i-ultralight entsha) ngamakhompyutha analezi zici, ngaphandle kokungeza inkumbulo eyengeziwe, noma i-CPU noma i-GPU ngeke iguqulwe.
2. Izinsiza ze-AIO (Zonke-in-One) zilandela umkhuba ofanayo futhi ama-AIO athoma ukuthengiswa yonke indawo ngoba izici zalesi processor zanelisa kakhulu ukuphequlula i-Face $ hit, ukuthumela ama-imeyili nokusebenzisa i-office suite.
3) Ngabe imishini yamaminerali isathengiswa!? Uma kunjalo, ngeke ngimangale uma ama-99% alawo makhompyutha enebhodi lomama eline-GPU nekhadi lomsindo elihlanganisiwe lapho bengeza khona i-CPU ephansi ukuya phakathi kwebanga nememori dimms.
Inqobo nje uma bengenzi i-Apple bitch yokukuthengisela umshini onememori ethunyelwe kumama (kufanele kube ngu-h. Of p. Ehhhh) ukuthenga umshini onamandla ngokulingene sinemishini isikhashana ...
Ithanga lami elithobekile liyi-5 gen i1 futhi ligijima i-KDE SC 4.9.3 ngesiqapha sangaphandle (ama-desktops ayi-8 esewonke) njengonkulunkulu, futhi ngibe naso unyaka nohhafu futhi kulokhu engikubonayo kuzohlala isikhathi eside. Impela usuku engizolushintsha ngalo ngizothenga i-smartphone ene-Ubuntu noma enye into efana naleyo engingaxhuma kuyo i-monitor kanye ne-keyboard bese ngikhohlwa unomphela ngokuthwala i-hulk in tow! i-xD
"Uma siyicubungula ngokungakhathali, ngaphandle kwamacala akhetheke kakhulu namuhla akekho owakha imishini yakhe yangokwezifiso" ... Ngiyamangala ngalesi sitatimende, ngoba empeleni, ama-modders amele ingxenye ebalulekile yemakethe yezinga eliphezulu futhi ephezulu kakhulu- end izingxenye, kanye nokubaphonsela inselelo engxenyeni enenzuzo enkulu emakethe yabo, ngakolunye uhlangothi, uma ungayiboni injabulo yokuthi ukwenza lokhu kumele iningi lethu, akukufanele ukukuchazela.
Yeka ukuthi kunjani ukunikeza amagama ama-hipsters kuyo yonke into, ngazakhela imishini yami eminyakeni eyi-10 ngaphambi kobuhlakani bokumaketha obuqhamuka negama elipholile kubafana ababhincile abakha umshini o-skinny ozodlala uCrysis 😛
Nah, njengoba uJuan Carlos esho, ama-desktops wendabuko namuhla awenzi mqondo ngaphandle kokuthi uyi "modder" futhi wakha umshini ongenakwenzeka ukuphupha eminyakeni embalwa edlule ukusebenzisa imidlalo emincane.
Futhi ngubani okutshele ukuthi ngake ngakha iPC yokudlala imidlalo? ... siyaphinda ngaphandle kokwazi. Uma ikhompyutha enamakhadi ama-tuner ama-2 wokuthwebula (1 we-satellite TV + HD nenye ye-TV yasemhlabeni) kanye nekhadi le-RAID, konke mayelana nebhodi lomama elisebenza kahle nge-CPU enamandla nenkumbulo eyanele iyithuluzi lomdlalo, uqinisile.
Shwele ilukuluku, kepha yini inhloso yale maquia?
Ngibone ukuthi le bekungaba yimpendulo B)
Kulokhu, kufanele ngikutshele ukuthi awuyena umsebenzisi wokugcina nokuthi izidingo zakho ziqondene ngqo, ngqo njengalezo umculi angaba nazo nokuthi uzohlanganisa indawo yakhe yokusebenza namakhadi omsindo, i-RT kernel nakho konke izinto ezincane.engingazisebenzisa. Nalapha futhi, lolu hlobo lomculi akulona olugcwele 😉
Umsebenzisi wokugcina onezinsizakusebenza ezithile zezomnotho - noma akazitholi - futhi ngubani ozozinikela ngendlela efanelekile ekulalelweni / kuvidiyo futhi engenalo ulwazi lobuchwepheshe lwamakhompyutha athenga iMac ngqo, bonke abanye namhlanje bathenga I-AIO noma incwadi yokubhalela ene-Windows. Kulabo abasele, idlanzana elincane lithenga ideskithophu yendabuko ngenhloso yokulenza likhuliswe futhi landiswe ngokuzayo, kubalwa eminweni yesandla esisodwa, ngoba ngaphezu kwezidingo zabo zobungcweti kumele babe nolwazi oluphambili lwekhompyutha ngoba umshini ofana nalowo osibiza ngegama akusona isikhali noma isalukazi sakho noma umalume wami, hamba uyochaza ngama-jumpers, izingxabano ze-irq, isivinini sebhasi ...
Woza ndoda, ngaphandle kwezimo ezithile, imishini ehlome ngokukhululeka ngeshwa isengozini yokuqothulwa, okuyi-bitch ephindwe kabili ngoba uma ngomunye wale mishini into ethile iyeka ukusebenza futhi unolwazi lokuyixilonga, uyashintsha yona ne-voila, ene-AIO noma inothi uzophelelwa umshini baze bayibuyise kusuka kusevisi 😛
@josue: Ngaphezu kokuyisebenzisa njengendawo yokusebenza kuyo yonke into ongayicabanga, ngangiyisebenzisela ukuthelelela i-satellite TV nokuqopha izinhlelo (bekukuhle ngenkathi kuqhubeka i-sñif…), ukuthekelisa isithombe ku-TV futhi wenze njenge i-NAS yawo wonke amanye amakhompyutha kunethiwekhi. Ngenhlanhla ngokuhamba kwesikhathi ngakha enye i-PC ngohlobo lwe-chassis yedeskithophu lapho amakhadi weshuna ahamba khona, ukuphatha ukumisa i-HTPC etholakalayo.
@msx: Hhayi-ke, ukuze ubone, angizibheki njengomsebenzisi ongajwayelekile, mhlawumbe kungenxa yokuthi abangane bami nabantu engibaziyo bathanda amagajethi, futhi isikhathi eside ukuphela kwendlela yokuba ne-PC lapha ukuzakhela noma umsebenzi womunye umuntu, ukuze isiko ligcwale abantu kakhulu. Eqinisweni, ekhaya sine-PC ehlangene nefektri kuphela, isiteshi se-HP, futhi bekuyisipho abanginike sona. Futhi yebo, ngiyavuma nginecala, ngiyazithanda zonke lezo zinto ezimayelana nama-jumpers, ama-IRQ neminye imininingwane abanye abakuthola kuyisicefe nakanjani.
Angicabangi ukuthi imishini ehlomile isengcupheni yokuqothulwa, okwenzeka ngeshwa ukuthi ifuna ukuyicisha, ngoba iqembu elinjalo livame ukuhlala iminyaka eminingana, ekhaya nginayo esivele ineminyaka engu-8 ubudala futhi iyaqhubeka nokulwa, ngenkathi lawo ma-AIO esamile Kuze kubonakale ukuthi ahlala isikhathi esingakanani.
Angikaze ngithande ukuthi abanye bangithathele isinqumo, futhi kungezinye zezizathu zokuthi kungani ngithanda isoftware yamahhala, ngakho-ke cabanga ukuthi ngizizwa kanjani ngomuntu "okhetha i-PC yami ukuthi ingaba njani nokuthi yini engikudingayo.
Yini engenangqondo ukwakha iPC yakho? Angenzi lutho olunye empilweni yami yonke. Ngithenga izinto ngendlela engiyithandayo nalapho ngithanda kakhulu, futhi ngiyakujabulela ukwakha umbhoshongo, nombhoshongo osezingeni eliphezulu onentengo enhle, hhayi ukukhwabanisa abakuthengisela khona ngaphandle ngamanani aphezulu.
Ngiyangabaza ukuthi noma ngubani okuqondayo lokhu uzothenga umbhoshongo osuvele uhlomile, kubonakala kungenakwenzeka ukuthi lokho kwenzeke. Futhi uma nginephutha, ungitshele.
Kulungile, uyabona ukuthi ungomunye wami!… +100
Kuyacaca ukuthi kunokuthambekela kokufuna ukususa i-PC yedeskithophu kumsebenzisi ojwayelekile, obengaba nomakhalekhukhwini, amathebulethi, ama-netbook, ama-ultrabooks, izincwadi zokubhalela, noma lawa ma-oliwan «PC» nabadlali be-wii, playstation, i-xbox, njll.
Ngamanye amagama, umqondo ngukuthi ikhompiyutha iyisetshenziswa esisetshenziswayo futhi esishintshelwa esinye lapho singasasebenzi, nokuthi abantu bahlala ezindlini ezincane nezincane, esinendawo encane yama-PC naphakathi komsebenzi nesikhathi sokuya emsebenzini abasidingayo okuthile okubanika ukuxhumana futhi kuyaphatheka
"Kuyacaca ukuthi kunokuthambekela kokufuna ukususa i-desktop pc kumsebenzisi ojwayelekile,"
Siyini isisekelo salowo mbono wozungu!?
Ngicabanga ukuthi kunesidingo sangempela sokusebenzisa amadivayisi aphathekayo axhumene nezinsizakalo zefu, okungenani mathupha ithebhulethi / i-smartphone combo ixazulula ingxenye enhle yezidingo zami zekhompyutha njengomsebenzisi wokugcina.
Ngamandla lawa madivayisi anawo, kuya ngokuya kungadingeki ukuba nekhompyutha yedeskithophu, yize ingeke isatshintshwa ngokuphelele - okungenani ukusetshenziswa kwesiqaphi esikhulu nekhibhodi yangempela - ukuhamba kuka-Intel akwenzi okuningi ukulandela indlela emakethe ethathayo, iya ngokuya ithonywe abathengi abanolwazi nabanolwazi.
Angicabangi ukuthi kukhona umuntu ofuna ukusithengisela noma iyiphi i-prepo, kunalokho, njalo lapho inkampani yezobuchwepheshe ifuna ukwenza into efana naleyo ihlale ingahambi kahle, namuhla abantu banolwazi oluningi futhi banolwazi olungcono kuneminyaka edlule futhi abafuni ukuchitha imali okukubiza kakhulu ukuthola kumikhiqizo ongayiboni ifanele noma ngokwesidingo sakho noma ukunambitha kwakho.
msx Ngicabanga ukuthi uhumusha kabi incazelo yamazwi ami, bengikhuluma ngeqiniso lokuthi kukhona "ukuthambekela" kokubeka phansi i-pc, okukhuthazwa yizinkampani (i-hardware ne-software (win8 gnome3)) futhi kwamukelwa ngabantu.
Ikakhulukazi lokhu kwezinto zikagesi zamakhompiyutha, lapho ibhethri lidayiswa khona, kanye nenqama futhi manje iprosesa ingangijabulisi, ngincamela i-pc yedeskithophu engingayakha ngezinto engizifunayo (inqobo nje uma imali ingafika kimi I-xddd)
"Angicabangi ukuthi kukhona umuntu ofuna ukusidayisela noma iyiphi i-prepo" mmm ... kunento ebizwa ngokuthi umkhankaso wokukhangisa i-xddd
»Namuhla abantu banolwazi oluningi futhi olungcono kuneminyaka edlule» mmm…. abantu babheka intengo nenani lezimali bese begcina bethenga lonke udoti
"Bengikhuluma ngeqiniso lokuthi kukhona" ukuthambekela "kokubeka phansi i-pc esihlokweni, okukhuthazwa yizinkampani (i-hardware ne-software (win8 gnome3)) nokwamukelwa ngabantu."
Kulokhu ikakhulukazi angivumelani kangako, angicabangi ukuthi kunjalo, ngicabanga ukuthi kukhona ukuthambekela okusobala kokufuna imikhiqizo ephathekayo nenamandla futhi ngokuqeda ideskithophu ibuyiselwa emuva ...
«Ikakhulukazi lokhu kwamakhompiyutha-izinto zikagesi, lapho ibhethri lidayiswa khona, kanye nenqama futhi manje iprosesa ayingijabulisi,»
I-Pfff, akunjalo, ingabe uthole ukuthi i-Apple yenzeni ngama-MBP amasha? Uma uzithenga kufanele ukhethe ukuthi ufuna imemori engakanani ngoba i-welding emshinini !!! WTF!
«Ngikhetha i-pc yedeskithophu engingayakha ngezakhi engizifunayo (inqobo nje uma imali itholakala nge-xddd)»
Ngokwami, namuhla anginakho ukusetshenziswa okuningi kwedeskithophu enjalo, okungukuthi, i-AIO, i-minitower, njll.: Yebo, ngine-laptop engu-17,1 I engiyisebenzisa sengathi yideskithophu engixhuma kuyo ne-23 Monitor Ukuqapha kwe-LG engikusebenzise kuze kube unyaka odlule kwideskithophu manje eyenza i-NAS 🙂
"" Angicabangi ukuthi kukhona umuntu ofuna ukusidayisela noma yiphi i-prepo "mmm ... kukhona okubizwa ngomkhankaso wokukhangisa i-xddd»
HAHA, yebo uqinisile, ukuyifunda kanjalo kuzwakale kuyisilima kakhulu njengoba ngiyibhale i-xDD
Lokho ebengikusho ukuthi angicabangi ukuthi bafuna ukusithengisela okuthile ukuze bashintshe okunye, okungukuthi, kubonakala kimi ukuthi imboni ifuna kakhulu ukufa kwedeskithophu, ideskithophu izokwenza lokhu ngikhubazeke isikhathi eside kuze kube yilapho sinesihlakala sesandla esiyi-All in One ukusikhombisa i-holographic screen (!!!) ... kulungile, angazi ukuthi sizoke sisibone yini leso sikrini, kodwa sizofa kancane, isayine.
»Namuhla abantu banolwazi oluningi futhi olungcono kuneminyaka edlule” mmm…. abantu babheka intengo nenani lezimali bese begcina bethenga lonke udoti
Ngiyavuma, kepha ngingalokotha ngithi lokhu kwenzeka kakhulu kunanoma yini lapha eLatin America lapho i-hangover elahlayo ifika khona njalo.
Uma ungaba nethuba lokubuka ithelevishini evela kwamanye amazwe (i-Europe, i-Australasia, i-USA ne-Canada) uzomangazwa inani lezikhangiso ezihlobene nesoftware noma nobuchwepheshe okungekho lokho kuphela, kepha futhi kunamabhulokhi ahleliwe ezindabeni ukukhuluma nge-software, i-hardware, njll.
Okubi noma okubi emazweni akulezo zifunda umphakathi jikelele usetshenziselwe ukubhekana nobuchwepheshe nemishini enamandla yamakhompiyutha ngokujwayelekile * ifinyeleleka kakhulu kunalapha eLatin America lapho intela yokungenisa, intela yamasiko nezinye izinkokhelo ezengeziwe izinto ezibabazekayo 😛
Isibonelo, i-MBP Retina (engeyona i-retina ngoba ayifinyeleli ekuxazululeni i-retina kepha bayayikhuthaza kanjalo), okuthe emhlabeni wonke kubiza ama-US $ 2700 lapha e-Argentina, imodeli enama-specs amancane ibiza i-US kalula $ 4200, ngiqonde ukuthi u $ s1500 ngaphezulu, ngaphandle kokuthi okuluhlaza okungu-2700 noma yikuphi okuyiwele elihle kodwa kumuntu onomholo omuhle angalithenga nakanjani, lapha ku-Arg. U $ s4200 akutholakali kubantu abangama-97% , kuyahlanya uma kukhulunywa ngeholo nezindleko zokuphila.
Iqiniso ngukuthi ngamandla anezincwadi zamabhuku manje, kubonakala ngathi akunangqondo ukuhamba uzungeze i-PC yedeskithophu. Eyokugcina engiyakhile yayiyiminyaka eyi-5 eyedlule (angikaze ngithenge umbhoshongo ohlomile empilweni yami), ngaze ngathenga i-Acer yami, manje ephethwe yindodakazi yami, manje neLenovo yami. Iqiniso ukuthi angiphuthelwa "i-hulk" nhlobo, futhi manje ukuphela kwento engiyisebenzisayo ukuyinika iklabhu neklabhu ngokusatshalaliswa kweLinux. Hhayi manje ngoba umqaphi wami ushile.
Ngakolunye uhlangothi, esimweni lapho uthenga i-PC ehlomile, cishe awukho umehluko wentengo, ngakho-ke ngincamela ukuhlala kwi-laptop. Ithebhulethi? cha, kuhle kimi, ngibona ithoyizi elingasizi ngalutho ukusebenza nalo, bah, ngakho konke, ayikho indlela abangikholisa ngayo ukuthi ilusizo kokuthile.
Kusenomehluko omkhulu phakathi kwamadivayisi aphathekayo namakhompyutha ejwayelekile wedeskithophu.
Ngisho nasezintweni "ezilinganayo", amasethi wedeskithophu azokwenza okuningi, akwazi ukuphola kangcono futhi angabi nezinkinga zesikhala.
Konke kuncike ekusetshenzisweni ofuna ukukunikeza, ngoba kuyiqiniso ukuthi ezintweni zansuku zonke imishini enamandla ngokweqile ayidingekile futhi ingenziwa nge-laptop engabizi, kepha kwimisebenzi edinga amandla amaningi we-hardware, ama-laptops ayisisombululo kubiza kakhulu kune-desktop futhi akukwazi ukunikela ngokusebenza okufanayo.
Konke lokhu kuya ngokuthi yini esiyifunayo / esiyidingayo lapho sithola okokusebenza kanye nenhlokodolobha esiyifunayo / esingayitshala kuyo. Kuyinto ejwayelekile ukubona abantu abathola imishini ephathekayo ngenxa yokuhamba / usayizi wayo lapho obekudingeka ngempela kungamandla le mishini engabaniki kona nabantu abathenga i- “hulk, kanti empeleni lokho ababekufuna kwakungukuhamba nokonga isikhala futhi nge laptop babezoyisebenzisa.
Kimi, inzuzo ye-PC yendabuko phezu kwezincwadi zokubhala namanye amadivayisi eselula ayikho emandleni, kepha iyahluleka. Sekuyiminyaka eyi-10 ngisebenzisa izincwadi zokubhala, ngeshwa namuhla anginabo (ubuso obudabukisayo) futhi ngithola ikhibhodi yendabuko futhi ngiqapha ukungakhululeki, kepha bengilokhu ngine-PC okungenani eyodwa ekhaya (imvamisa 1), bonke ihlelwe futhi yahlanganiswa yimina, kufaka phakathi amakhadi angeziwe wamadiski afakwe i-RAID, amakhadi weshuna / wokuthwebula, njll., lokhu nge-laptop akunakwenzeka, ngakho-ke ngikholwa ukuthi i-PC izoqhubeka nokudlala indima enkulu emvelweni amadivayisi wamanje nawesikhathi esizayo ngesikhathi esifushane.
I-micro ethengiswe kumama ethengiselwe ikhabethe elibethelwe edeskini linanyathiselwe phansi endlini ... futhi ukhanyise okungalungile kwe-BIOS ... fa ...
Hahaha… kuhle kakhulu.
Wadlula. Isinyathelo se-facebook, isinyathelo se- «Smartphones» (uma ubonile iselula enginayo…), isinyathelo se- «Cloud Computing», isinyathelo sethebhulethi, isinyathelo sokungakwazi ukuzakhela i-p # PC yami ne-PC p # c engizikhethayo (ingxenye emnandi kakhulu yokuthuthuka). Isinyathelo sokufuna ukungenza ngikholwe ukuthi kuyadingeka ukuthenga iPC entsha njalo eminyakeni emi-2. Ngisuka ekubeni ngingazi ngokuphelelwa yisikhathi okuhleliwe, ingasaphathwa eyokukuthokozela ngenjabulo.
Ngakolunye uhlangothi, ngenhlanhla, angazi ukuthi baqonde ukuthini uma bethi nge-AMD akunakwenzeka ku-gnu / linux, ngikhethe i-amd / ati isikhathi eside engikukhumbulayo. I-gpu yami yokugcina, i-HD6670 ayibukanga kahle (konke kuhanjiswe ohlangothini olulodwa) lapho ufaka Ubuntu 12.04, bekuyindaba yokufaka umshayeli wakamuva (ngeshwa umnikazi) kusuka kumkhiqizi.
Umqondo we-APU (SOC) ubonakala umuhle kimi, ikakhulukazi ezinhlotsheni ezithile zezixazululo ezinjenge-HTPCs, ngokwesibonelo. Kepha angithandi inketho yendabuko ye-CPU (i-FX kulokhu) isuswe lapho kudingeka khona.
Esikhundleni sokususa izinketho, kungakuhle uma bengasinika izinketho eziningi, ngokwesibonelo, ithuba lokuhlangana nama-CPU we-ARM.
Izinketho zabafana, izinketho ... kungcono kakhulu ... empeleni, lokho (phakathi kwezinye izinto) yikho okwenza iGNU / Linux ibe nkulu (yize kukhona labo abayifunda njengokuqhekeka okungathandeki)
hahahahahahahahaha ahhh, yini boludín! i-xD
Isihloko esizonikeza okuningi ukukhuluma ...
Ngokuya ngekhwalithi nokusebenza esimweni se-Intel, cishe akunakuphikwa. Kepha inkinga iya kwezinye izindlela, futhi ikakhulukazi ukwanda kokusetshenziswa. Ama-CPU amaningi azothengiswa nokuthi ezingeni lebhizinisi akunakuphikiswa.
Kusukela manje kuqhubeke, ukushintshwa kwebhodi yomama, ngokufaka i-CPU, kuzobe kungenzeki kwezomnotho. Lokho kusho udoti omningi nokusetshenziswa okuningi kwe-PC. Wonke umuntu uyajabula.
Asisakwazi ukukhuluma ngokuphelelwa yisikhathi okuhleliwe noma okubonakalayo, kepha kunokuthi siphelelwe yisikhathi ngamagama amakhulu.
Kuzohlala kunezixazululo ngokuhlukana, ngalokho ngiqinisekile.
Kusukela kulo mzuzu sengivele ngazi ukuthi angifanele ukuya kuma-processor we-Intel.
Konke lokhu kumane nje kuyizinyathelo zongxiwankulu, zokukhiqiza ukusebenzisa ngokushesha nokulahla nokuthenga futhi. Khiqiza bese ulahla. Kuyafana nangemishini noma izimoto, noma omabonakude. Konke lokhu kunesikhathi esingaphezu kokubalwa yizinkampani. Ukuthi ihlala isikhathi esilinganiselwe nokuthi iyaphuka futhi akukho okunye abangakwenza ngaphandle kokuyifaka okusha. Ubuqaba bakho konke lokhu singabasebenzisi nemvelo eyehlisa isithunzi nabazuzi, ngokunengqondo, izinkampani. Ngakho-ke ngikuhoxisa obekushiwo ngenhla nge-Intel: Into efanayo kufanele kube yi-Intel yokuthi i-AMDE esikhathini esimaphakathi wonke umuntu kuzodingeka ayithenge futhi, uma enemali ecacile. Konke lokhu kunokujula okuningi kakhulu kunalokho okubonakala futhi akunakwenzeka ukukufingqa ngokuthunyelwe okulula.
njengoba kunjalo nge-kikilovem ... njengoba kunjalo ...
Wonke umuntu ngokombono wabo uqinisile, kepha iqiniso ukuthi izitayela zikhombisa ukuthi ukuhamba kuyinkosi futhi kuzoba njalo ngaphandle kokuthi kwenzeke okunye. Ama-PC wedeskithophu azoba njengoba kusho i-All In One uma kuliqiniso ukuthi ama-varato amaningi ayaphuma kanye nokukhiqiza amabhodi womama amaningi ane-micro soldered. Ngincamela yonke into engahlanganiswa ngenxa yokuqina, ukuthembeka nokuqina, kepha uma ubheka namuhla, cishe yonke imishini yenzelwe ukuthi ilahlwe kakhulu eminyakeni emihlanu, noma ngabe hlobo luni noma ukusetshenziswa kwemishini.
Inzuzo yokuthi thina esisebenzisa i-Linux ngisho ne-UNIX ukuthi banikeza impilo ende kwimishini, ngokwesibonelo nginePentium 3 ene-512 RAM ne-200GB IDE DD (yize bengayikholwa) kanye ne-Arch I-openBOX isebenza izimanga futhi ayibuzi i-PC eningi.
Ngeshwa uqinisile kulokhu okushoyo, futhi ngithi "ngeshwa" ngoba imiphumela yalezi zitayela izokhokhwa yibo bonke, ngokoqobo, ngemali enzima.
lokhu kuzwakala kimi sengathi i-intel iyaqothuka, funda ezinkingeni ezinama-360 futhi adlale ama-consoles ama-3 ahlaselwa minyaka yonke ngokushisela, uma i-intel ishintsha ngizoya e-AMD ngaphandle kokucabanga ngakho ngoba bazoqhubeka nesokhethi.
Nokho, ngakolunye uhlangothi bathi banciphisa izindleko zokukhiqiza uma bengakwazi ukuzinciphisa kepha kuzobiza kakhulu nezwe lokuqinisekisa ukuthi kuzodingeka banikeze ngamakhadi anganiki ividiyo noma angafundi idrayivu noma i-hard disk ngenxa yokushiswa kwe-chip, kulapho i-AMD izovela khona njengenkosi njengoba abantu ababona lezi zinkinga bengacabangi bazoya e-AMD
NGITHEMBA UKUTHI UNGANGAMFUNI NJENGOBA NJENGOBA ENGIYITHANDAYO